Zvakavanzika zveVakare, iyo nyowani Hondo yeWesnoth mushandirapamwe | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Linux Mitambo
Kana paine mutambo wevhidhiyo mukati meGnu / Linux iyo ine zvishoma zvekugodora kune mamwe ese emavhidhiyo emitambo pane mamwe mapuratifomu, izvi zviri pachena kuti Hondo yeWesnoth. Uyu mutambo wevhidhiyo unosanganisa zano uye chinzvimbo ichangobva kuve neyakagadziridzwa iyo isingogadzirise mutambo chete asi inowedzera mamwe macampaign uye zviitiko kune iyo yatove nhoroondo yeWesnoth.
Mune ino kesi, iyo vhezheni itsva inonzi Hondo yeWesnoth 1.13.7. Iyi vhezheni inosanganisira mushandirapamwe mutsva unonzi Zvakavanzika zveVakare. Mushandirapamwe unoenderera nenyaya dzeWesnoth uye zvakare unotora mukana wezvinhu zvitsva zvinoshandiswa neshanduro nyowani.
Zvakavanzika zvevaKare mushandirapamwe mutsva uyo inoumbwa nematanho makumi maviri nepakati epakati. Mushandirapamwe uyu wakaitwa pane vhezheni 1.12 uye 1.13 maseva, saka Hondo yeVashandisi veWesnoth vachakwanisa kushandisa mushandirapamwe mutsva.
Hondo yeWesnoth inoenderera ichikura kunyangwe mashoma mishandirapamwe yavanotanga
Pamwe pamwe nezvakavanzika zvekare, ivo vanogadzira vakasanganisira UI nyowani inovandudza chinongedzo kuitira kuti ibudise ruzivo, senge mameseji, vhidhiyo yemitambo manhamba, nezvimwe ... Iyo yemamiriro epasi magrafiki akachinjwazve uye akavandudzwa, kunyanya chimiro cheyavava, kutaura imwe. Mamepu evatambi akawedzeredzwa nemamwe mapu gumi nemapfumbamwe anotendera vatambi vanosvika vana kutamba.
Hondo yeWesnoth yakazvarwa semutambo wevhidhiyo yeGnu / Linux, asi nekuda kweFree Software uzivi, uyu mutambo unogona kuiswa pane mamwe mapuratifomu akadai seMacOS kana Windows. Kana iwe uchida kuyedza uyu mutambo pane aya mapuratifomu, mu Iyi link unogona kuiwana. Zvino, kana uine Linux kana iyo vhidhiyo mutambo waiswa, Unongofanira kushandisa Software Center yekugovera kwako kuiisa kana kuigadziridza, chimwe chinhu chakakosha, kwete chete kumushandirapamwe mutsva asi zvakare kune zvakawanda zviputi zvinogadziriswa neshanduro iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Zvakavanzika zvevakare, iyo nyowani Hondo yeWesnoth mushandirapamwe
Ndinofanira kutaura, handina kumbobvira ndanzwisisa maitiro ekuitamba.
Pindura kune gallopelado
Iyo ine mamwe ekutanga macampaign ayo akanaka kutanga, kana iwe ukaverenga zvakataurwa zvemushandirapamwe mune menyu ivo zviri nyore kuwanikwa. Muzhinji iwo mutambo wekutendeuka, iwe unofambisa yega yega ye "zvidimbu zvako" uyezve muvengi anoita zvakafanana. Kunyangwe iine "retro" mifananidzo, iri yemhando yepamusoro.
Motorsport Manager mahara kwevhiki rimwe chete